Wondershare Si Software N'ihi Schools onyinye Mmemme
> Company> Software maka Ụlọ Akwụkwọ
Enye azụ ka obodo Inyere ụmụ akwụkwọ na-eme ezi
Anyị na-agba Mmụta na-ajụ, Ịnyocha, Mepụta, innovate
Na Wondershare, anyị kwenyere na technology nwere ike ime ihe ndị dị ịtụnanya. Ọ bụ ya mere anyị na-eme họrọ Wondershare software utu aha maka onyinye ahụ n'ụlọ akwụkwọ gburugburu ụwa. Na-aka nke ụmụ akwụkwọ, technology nwere ike na-akpali & edita pụrụ ichetụ n'echiche na nke klas. Wondershare Software akpali ụmụ akwụkwọ na-eche creatively ka ha ịzụlite, mejuputa, na n'ụzọ dị irè na-ekwurịta okwu ọhụrụ echiche na echiche. Ọzọkwa, nri technology ego na klas nwere ike ịbụ a dị ike na-akpali akpali unlocks ohere na-eto eto aka nweta ha ndụ-ihe mgbaru ọsọ ma mee ngwangwa ha nti mmetụta na ụwa anyị bi na.
Mmemme Okwu Mmalite
TV Ajụjụ Ọnụ
Wondershare ™ kọwakwuru Popular "Software N'ihi Ụlọ Akwụkwọ" onyinye Mmemme ndị ọzọ Software Aha E Nwere
Wondershare ™ kọwakwuru Popular Software onyinye Mmemme; Ọrịa Aids College ibikwa High School Seniors na New Ọkà Mmụta Mmemme
Nwere mmasị na-eweta na-akpali akpali ngwá ọrụ ọhụrụ n'ime klas?
Wet ke ngwa ụdị
Product aha: Wondershare Video Converter Ultimate Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Wondershare Video Editor Wondershare Video Editor for Mac Wondershare Fantashow Wondershare Fantashow for Mac Wondershare PDF Editor Wondershare PDF Editor for Mac Wondershare QuizCreator
School Ụdị: Elimentary Middle / High akwụkwọ College / University
School aha: Kpọtụrụ Onye / Mbụ:
License Email: Number nke ikikere rịọrọ, sị:
A ilekiri n'ụlọ akwụkwọ Anyị nyere ka
"Anyị na-mgbe na-achọ iji mụbaa ohere dị ụmụ akwụkwọ anyị na-enweghị Wondershare mmesapụ aka onyinye, anyị agaraghị enwe ike mmefu ego maka àgwà a nkiri na-eme ngwọta na klas."
--Joshua Jacoby nke Yeshiva University High School
Ajụjụ: Olee otú Wondershare enyere m nzukọ? Olee ihe dị m?
A: ugbu a, Wondershare na-inye onyinye naanị software na ọ na-arụpụta. Biko hụ ndepụta n'elu maka nkọwa na ihe Wondershare ngwaahịa nwere ugbu a dị.
Ajụjụ: Enwere ịgba na ole software m akwụkwọ nwere ike-enweta site n'aka Wondershare Software onyinye usoro?
A: E nweghị ịgba otú ọtụtụ akwụkwọ nwere ike nyere; ọ na-enyocha na ikpe-site-ikpe ndabere. I nwere ike ịrịọ software maka otu klas, a ụlọ akwụkwọ ahụ dum, ọbụna ihe dum district.
Ajụjụ: Ọ Wondershare nye software onyinye mba?
A: N'ozuzu ee, Otú ọ dị iwu ịdị iche iche site ná mba ruo ná mba. Ọ bụrụ na i bi na-enye ohere azụmahịa ụlọ ọrụ inye software maka ojiji na ụlọ akwụkwọ, Wondershare ga-enwe obi ụtọ tụlee arịrịọ.
Ajụjụ: Ọ bụ na ufọk-akwụkwọ gburugburu oruru-enweta nyere software?
A: Ugbu a, Wondershare na-inye onyinye na-accredited ọha, onwe, na ichata elementrị, Middle, na High Ụlọ Akwụkwọ. Pubic na onwe obodo kọleji, 4-afọ University, na accredited ahia ụlọ akwụkwọ na-ume-etinye.
Gịnị bụ dị
Akwụkwọ elementrị Onyinye
Na ezigbo ngwá ọrụ maka ụmụ akwụkwọ iji tọghata vidiyo si na nnọọ ihe ọ bụla dijitalụ usoro ọ bụla dị mkpa usoro.
A fun na mfe iji nkiri na-eme ngwa na-bụ zuru okè n'ihi eke fun fim izipu n'ụlọ nne na nna na a DVD ma ọ bụ dị ka ihe online nkiri gwa Facebook, YouTube!
Middle / High School Onyinye
Ikpeazụ n'ụlọ akwụkwọ afọ nyere ngwaahịa bụ ka a kụrụ na klas ebe elu ndị ọzọ video edezi na nkiri Ndinam ike na-chọrọ.
Ọ dị mkpa na-enwe ike dezie a PDF dị ka ihe ụlọ akwụkwọ na-atụgharị online akwụkwọ dọọ ule na klas usoro ọmụmụ na PDF. PDF Editor Bụ nhọrọ kasị mma.
College / University Onyinye
Ka nkụzi dọọ online ule na quizzes na ala ma na-enye a azụ-ọgwụgwụ na-enye ohere maka gbatara results na-emailed azụ-amụrụ ihe.